Gaffi domondaa aziilii fransa kessatii ⋅ GISTI
Accueil > Pratique > Demander l’asile en France > Gaffi domondaa aziilii fransa kessatii
ዝመናው በዚህ ቋንቋ (ከ4 ቅርጽ በስተቀር) አይገኝም, የሌሎችን ቋንቋዎች ይመልከቱ
Fiish aziilii kan jedhamuu tajaajiilaa interneetii ariitii dhan barbachiisaa dha. Sababaa jenee kan yadnee godantootaa heduu dhibantaan lakawaman sadarkaa meenshaalee ta’uus sadarkaa bulchiinsaa seeraas haalaa sodachiisaa ta’uu irraa jiirachuu kesan kan ittii ilaalamu ta’uu isaadha. Godantoonii tokkoo tokkoo baka dhokataa giduugaleesaa tiin godhamanis achiitii ta’anii gargaarsaas ta’uu hordoffaa hin kenamuuf. Ida’uu dhan godantootaa hundaaf bakii irraa fudhatamaan wan hin jiireef bayeen isaanii wan idoo jiireenya hin kenamnen akka barandaa bulan ta’anii jiiran.
Saayiitiin kenya kan qopa’ee « Fiishii » gaffii maxanttuummaa dhiyesuuf mirgaa isaa kabajiichsuu fi akka harkaa bulchiinsaa farnsaayii hin senin odeefannoo barbachiisaa kennuuf kan qopa’anii dha.
odeefannoo qamaa bulchiinsaaf kenaman hundaa koopii isaa isiin birraa akka ta’uu isiiniin beeksisnaa.Gardez toujours une copie des documents remis à l’administration.
odeefannoo orjjiinaalii akka hin fidnee.
Namootaa gaffii maxanttuummaa dhiyesan wa’ee mirgaa isanii odeefannoo akka argatan ATMF, Dom’asile (domazillii), Gisti (zistii), la Cimade (Laa siimaadii) fi Waldan abukaatoo yookan Elena kan jedhamuu biroo walda gargaarsaa dhabanii jiiranii tajaajiilaa.
Biroo fi sa’aa wixataa fi roobii sa’aa 8 hanga12 tii. Idooniis 10 rue Affre 75018 Paris.
1. Namoottaa Gaffii Maxanttuummaa Gaafataniif Baki irra Fudhatamuu (PADA)
2. GUDA kan jedhamuu birroo koba gaafii maxanttuummaa keessaa addeemsii durran godhammuu (preefeekuturii fii Ofii)
3. Adeemsaa Dublliin saddii (biyyaa gamttaa Awroopaa birraa keessaa hajjaa dabaru)
4. Biyyaa faransayii keessaa namootaa biyyaa hin qabnee kan itti egamuu biroo OFPRA biraa gaffii maxanttuummaa dhiyesuf.
5. Murtii didaa Ofpra mormuf Cour nationale du droit d’asile (CNDA) mana murtii sabootaa maxanttuummaa birraa dhiyatuu gaffii oliiyannoo.
6. Wa’ee fayyaa
7. Mirgaa hojjii hojachuu
8. Ijjollee mattii malee biyyaa alaa kessa kanta’an
9. Wa’ee mattii kesan
4-1. OFPRA biraa adeemsaa gaffii maxanttuummaa
Dhiyesuf beleemaa isinif kenamef garaa preefeekuturii deemtan boda galmee gaffii maxanttuummaan afaan farnsayii tiin gutammuu qaba. Malateesuu fii guyyaa ittin berefame akka hin iranfatin isin yadachisna. Sanan bodaa warqa odeefannoo gaffii maxanttuummaa ittin dhiyesitan. Sanan bodaa warqa odeefannoo gaffii maxanttuummaa ittin dhiyesitan (fiche n°2-1) isin kenamee boda guyyaa 21 tiin guyyaa murta’ee tii. Recommandé avec accusé de réception kan jedhamuun erguu yookaan demtanii OFPRAf harkaan kennuu qabdanii.
Beksisaa : recommandé avec accusé de réception kan jedhamun xalyaa ofpraf erguu filatamaa dha. Sababnis xalyan ofpra galmee irratii barefamuu yoo isin irraa turee galmee erguuf odeefannoo wan qabdaniif preefeekuturii warqaa fotookopii keniitanii guyyaa murta’ee haqsiisuu nii dandesanii.
Galmeef suraa lamaa wajjiin warqaa odeefannoo gaffii maxanttuummaa fii senaa kesaniif ragaa ta’uu kan danda’uu kopii isaa wajjiin (kanan gadii illalaa). Yoo paspoortii qabdan ida’uu qabdanii paspoortii orjiinallii kesan galmeef ida’uu qabdani.
Beeksisaa : galmee ergiitan hunda kopii gotanii harkkan qabu’uu qabdanii. ininis galmee ofpra fii warqaa senaa kesan ibsuu wajiin galmee ida’amee waliin qaba.
Ofpran galmeen gutuu dha jedhee yoo amanee warqan gaffii maxanttuummaa isinif ergaa
1. Galmee Ofpra kan qabu kutaa adda adda
Odeefannoo ofii kesan maqaa baka dhalotaa kesan hala garii tiin gutammu isaa ofegdha. Sababniis abaa alengee repabliikaa gafachuu dandesanis debiin bayee nii turaa.
Wa’ee mattii kesan : biyyaa farnsayii kobaa kesan dhuftanii turtanii yoo mattii kesan fiduu barbadan (fiche n°9) kutaan kun bayee fayidaa qaba
akkataa ittiin dhuftan: PADAf odeefannoo barbachisaa ta’ee biyyaa farnsayii ittin senatan irraa kataba.
yeroo walgahiitiin nama isinif hikuu akka ramadammuu afaan dandesan beksiisuu qabdanii. Nama isiniif hikuu gafadha (afaan birraa yoo ta’ee irraa bareesaa). Afaan hin dandenyetiin hin guttiin isin yadachisna.
senaa kesan ibsuun gaffii maxanttuummaaf bayee barbachiisaadha. Sababnii gaffii mattuummaa yoomuu jenuu lubuu kesaniif kan sodatan senaa cunqursaa irrattii kan hundefamee dha (kanan gadii illalaa).
Haanga waigahiitii galmee ida’uu nii dandesanii. Yoo biyyaa kesan debiitan gochaa cunqursaa sodatan wan isinif ibsuf odeefannoo kopii gotanii Ofpraf yomuu ergiitan recommandé avec accusé de réception jedhamutiin xalyaa erguu qabdanii.
Beeksisaa : iddo jirenya yoo jiijjiirtan recommandé avec accusé de réception jedhamutiin Ofpraf beeksisuu qabdanii.
2. Murttiin Ofpra wa’ee maxanttuummaa cufuuf
osoo « sababa gehaa » hin qabiin guyyaa 21 guyya murta’ee keessaa galmee Ofpra yoo jin ergiinee guyya murta’ee 8 keessaa akka ergitan Ofpran issin gafataa. Osoo galmee hin ergiin guyyan murta’ee yoo lamadaf isin darbee Ofpran galmee cufuf niimurteesaa. Yoomu « sababaa gehaa » jenuu iddo jiijjiiru yookan rakinaa fayyaa ta’uu nii danda’a.
Wa’ee senaa kesan yookaan wa’ee enyumaa fii lammuumaa kesan kan kan fakatan odeefannoo kenuuf yoo didan yookaan yeroo barbachiisa kesattii iddo jiirenya yoo hin beeksisnee Ofpraf adeemsa gaffii kesan cufuuf nii murteesuu danda’a.
Murttiin cufamee yoo isin irraa murta’ee bodaa debii’ee naf habanamuu jetanii gafachuuf jii’aa 9 guyya murta’ee qabdanii.
3. OFPRAn gafii kesan hin fudhu jechuu nidanda’a.
Biyya awroopaa birrattii yoo maxanttuummaa isinif kenamee. Ininis adeemsii maxanttuummaa dhuga yota’ee debii’ee isin irraa fudhu yoo ta’edha.
« Yoo tasaa haryaa » osoo hin ibsiin debii’ee naf haqoratamuu yoo dhiyesiitan. Yomuu tasaa haryaa jenuu « ofiif sodachuu » kan isin ida’achise CNDA adeemsaa (fiche 5) bodaa kan nuf gahee ta’uu qaba. yookaan hanga CNDAn isin wamuu yoo hin beeknee odeefannoo dhiyesuu qabdanii.
4. Adeemsaa arriitii (procédure accélérée) Ofpra isin godhau danda’a
Galmeen gaffii maxanttuummaa yoo gahee bodaa Ofpran adeemsaa arriitii keessaa sensiisuu danda’a.
Ininis sababaa (malan malttumaa) jechunis odeefannoo forjiidii yoo isin irraa argame
Gaffiin maxanttuummaa wan hin barbaachiisnee yoo hubachiistan senaa kesaniitii wan amnsiisuu yoo hin ibsiinee
wana ibsitan yoo waliin hin madallee yoo ta’ee dha.
Gaffiin kesan guyyaa 15 keessaa nii qoratamaa..
Wan kanan gadii Ofpran adeemsaa arriitii keessaa sensiisaa.
Yoo rakoo bayee hin qabnee biyyaa « pays d’origine sûre » jedhamuu yoo dhuftan
gaffiin debii’ee naf haqoratamuu jedhuu yoo fudhatamuu dhabee kana irraa kan ka’ee preefeen adeemsaa arriitii sensiisuuf akkataan ittii ida’atan (fiche n°2-1).
Akkataa kenan mottuumaa dhan afaan adda addattiin kan gargalchamee Guide du demandeur d’asile illalaa
4-2. Senaa maxanttuummaa ibsuu
senaa kesan :
esaa akka dhuftan
biyyaa kesan irraa badanii biyyaa birraattii maxanttuummaa gafachuuf wan isin dhirqisiisee bainan ibsuu qabdanii. _ Gama birraatiin yoo biyyaa kesan debiitan wan sodatan ibsuu qabdanii. Ininins lubuu keesanif wan sodachisuu fii nagumaa kesan irra wan uumamuu ibsuu qabdanii.
Waranaa fii jequumsaa biyyaa kesan ibsuun qofaa hin gehuu. Senaan ofii kesan ibsuu nama dhubiisuuf amansiisuu qaba. Mattii kesanii fii fiiraa ta’ee yookaan hiryootaa kesan irraa wan mirgaa tuuquu yookaan rakkoo lubuu dhabsiisuu yoo irra gehee isiiniif wan sodachiisuu uumamuu ibsuu dha.
Beeksisaa : yoo afaan farnsayii hin dandenyee nama isinif hikuu arkachuu qabdanii. Senaa kesan yoo halaa gariitiin hin hikamnee odeefannoo irraa caqasuu qabdanii. Mootuumaan faransaayii hogaa walgahii ofpra fii CNDA wamuu nama isinif hikuu nii ramada.
1. Wa’ee enyuuma kesan.
Maqaa guttuu, lammuma, baka dhalotaa fii guyyaa
Biyyaa kamii irraa, magaalaa fii ganda esaa akka dhuftan (kan ibsiitan mirkanesuuf Ofpra dhan gaffii nii gafatamtan)
wa’ee mattii kesanii fii obleeyii kesan (akkataa halaa ammaa maqaa isanii umrii, baka jiirenya fii hojjii isanii fii sochii wa’ee mattii isanii.
aba mal, amanttii yookaan umattaa heduumiinan xiqaa ta’an cunqurfamuu yoo irraa gehee
halaa malittin aman tanaa jechuuniis yoo herumtan yookaan yoo hin herumnee. Ijoollee yoo qabdan maqaa fii umrii, salaa isaanii akkasuumas yoo hattii mana kesanii fii ijjoolleen biyyaa farnsayii yookaan biyyaa birraa yoo jiiraatan esaa akka jiratan yoo hin beeknee akkataa ibsuu qabdanii.
2. Senaan offii kesan mal maalii
ijjoolluuma kesan kan dabarsiitan esaa fii halaa jiirenya akamiitiin.
walumagalatii wa’ee sena barnootaa kesan
sochii biyyaa kesanii qabdan, wa’ee ittin bultan galii fii hojjii, madii qabenya fii heduuminaa
bakaii ittii jiiratan yoo baka adda adda ta’ee baka jirenya jiijiiruuf sababaa yoo qabdan
Halaa offii fii wa’ee mattii akamiitii jiijiiramee jechuus senaa hojjii kesaan yoo heruumtan esaa akka wal arkiitan. Yoo ijjoollee qabdee yoom akka dhalatan. Yoo nama dhukubsatee jiiratee akkataa isaa.
Sochii adda yoo qabdan jechuniis partii siyaasaa, walda hojatootaa, amantii fii misensaa walda gurma’ee yoo tateen (dhabataa yookaan bayiinaa misensaa walda kayoon isaa fii garagaruuma kan kan fakatan)
partii sanaf walda dhabatee misensaa ta’uu yoo dandesan. Hojjii isinif ramadameef itii gafatammumaa kesan (misensa dhabata yookaan sochiin isaa).
Hiriiraa, mormii, walgahii uumataa sochii gurmiin sochii walda qabsof nama qawee hidhatee yoo hirmatee (akkataan sochii kesan enyu wajjiin ta’uu isaa).
akka senaa kesan sababaa sochii kesaniin misensaa saba tokko yoo tatan, walqunamtii salaa Rakkon wan isin irraa geheef osoo hayama kesan hin argiin yoo isin fusisan kan kan fakatan. Tarkanfii cunqursaa yoo isiin irraa fudhatame kanan gadii balinan ibsaa.
Beeksisaa : nama miseensaa qawee hidhatee ta’ee yoo yakkaa rawatee biyyaa farnsayii gaffii maxanttuummaa dhiyesee diduu nii dandeesii.
3. Balaan biyyaa keesan gadhisuuf tasaan isin dhirqiisisee malmaal dha.
sodachisaan isiin irraa gehee (enyun, akkamiittii akka gehee)
hojjii yookaan sochii ofii akka hin gonee yoo isiin irraa murta’ee
Hattuumaa yookaan qabenya fii malaqaa keesan yoo isiin iraa fudhan sodachiisaan yookaan dhibaa adda adda isiin irraa gehee
Midha qamaa fii qabenya yoo isiin irraa baiesan. Yoo mana irraa ariammuu isiin irraa gehee.
poolisii dhan qabammuu, jacha humnaan isiin gafatuu, tuiichaa yoo isiin irraa gehee (yoom, akkamiitii enyun ta’uu isaa)
tasaa murttii dhiyesuu adabaa man hidha keessaa turuu yoo isiin irraa gehee (yoom eysaa enyun akka ta’ee adeemsii baka itti rawatamee ibsii)
mattii keesanitn yookaan hiriiyootaa tii dhabattaf misensaa kan ta’ee fii nama birraa irrattii qabamuu tumamuu yookaan tarkanfii ajjiefamuu kan itti murta’ee yoo jiran
mancaasuufii sanyii dhamsuu, kan ja’aan balinan ibsaa
Beeksisaa: Tasaa sana hanga dandesan baliinan ibsuu qabdanii. Rakoo san kan gesanii fii wana gesuuf ittin fayadaman. Isin akkamitti akka offii irraa egdan fii tarkanfii fudhatan nama isinif gahee yoo jiratee ibsii.
Mootuumaan biyya kesan mirgaa kesan akka eguu yoo jiiraatee (oliyannoo yoo dhiyesitan) mana murtiin himataa yoo jalqabdan dhabta bulchinsaa abaa angoo tiin xalyaa yoo ergitan yookaan yoo demtan
wana gotan yoo jiraatee bu’aan mal akka ta’ee kan jadhan balinaan ibsaa.
Beeksisaa : sababaa wana isinitii geheetiin samuu kesanitii yookaan qamaa keesaniitii rakkoo yoo isin irraa gehee odeefannoo walaansaa dhiyoo dhiyeessuu qabdanii.
4. Hanga biyyaa farnsayii itti dhutan karaa akamiitiin :
biyyaa gaddhisuuf kan murteesiitan yoomii
qophiin demmuuf wan gotan mal fakataa (wa’ee malqaa gargaarsaa isiniif godhamee yoo jiratee yoo dalaa lootaan dabartan)
biyyaa maxanttuummaa gafachuuf sababaa yoo jiraatee (sababaa murttii kesan) sababnii ittiin demtan
guyyaa fii baka itti katan fii bakka ittii dabartan halaa ittii demtan malaqa hangam akka bastan kan jedhauu balinaan ibsaa.
5. Halaa amaatiin yoo biyyaa kessan debitan wan mal mal tuu isin irraa gehaa:
yeroo isin gadhistan bodaa biyyaa kesanitii yookaan duran baka itti jiratan jiijjiramaa yoo jiiraatee isin irraa rawatamuu yoo dande’ee
cunqursaamun isiin irraa gahee yoo dedebii uu dandayee yoo akka of egdan isiiniitii kename isiin irraa rawattuu yoo danda’ee
osoo isin hin deemin yookaan yoo deemtan bodaa sababaa isiin basetiin matii kesaniitii du’aa yookaan nama dhiyoo ta’ee tiin wan isin irraa gehee ana iraas nii gehaa jetanii yoo sodatan bakaa itti jiiratan
yookaan magaallaa birra yoo jiraatan naguumaa kiyyaa irraatii yadachisaa ta’aa yoo jatanii yadan kan jadhuu balinaan ibsaa.
6. Senaa kesan kan ibsuu odeefannoo ida’uu
Jechuu dhan senaa ragaa maxanttuummaaf odeefannoo dhiyesuun derqamaa miittii. Isaa hundaraa wan murttii qabuu wan ibsitanii fii balinaan dhiyesitan kan wal madaluu fii kan dhugumaa qabuu dha. Ininis hojjattoonii Ofpra dhuga ta’uu isaa akka amananiif jecuu dha.
Ta’uus akkataan ibsiitan odeefannoo akka jabesitanii dhiyesuu yoo dandaa’anii garii dha. Odeefannon kuniis kan bareefaman ragaa odeefannoo bulchinssaa barefamaa gazeexootaa odeefannoo walaansaa kan kan fakatan ta’uu nii danda’aa.
Beeksisaa : galmeen gaffii maxanttuummaaf ergitaan orjinaalii osoo hin ta’an koopii ta’uu qaba. Gafaa mariitii agersiisaa.
4-3. Mariin hojjattootaa maxanttuummaa Ofpra wajjiin godhamuu
1. Mariif wa’ee warqaa wamttuu Ofpra
Turuus guyyaa marii duraa guyyaa 15 duraa warqa wamtuu Ofpra isinif gehaa Ofpran mariif isin hin wamuujedhee murtessuu nii danda’aa :
gaffii maxanttuummaaf biroon yoo tolee jedhee murtesee garuu halaa harwaa piin
sababaa walansaa qama kesan ollta’ee mariif dhiyesuu ni dandesan yoota’ee ariitii dhan odeefannoo walaansaa recommandé avec accusé de réception kan jedhamuutiin Ofpraf erguu qaba.
Gaffii kesanif ofpran yoo fudhuu didee yookaan adeemsaa gafii kesaniif yoo murttii godhee (kanan gadii illalaa) wal gahiif hin wamamtan.
Sababaa takkoo osoo hin qabin mariif yoo hin dhiyanee gaffiin kesan osoo hin qoratamiin Ofpran murtii didaa adeemsaa cuufuu nii danda’a.
2. Walgahiin halaa isaa seeraadhan egamuu
Walgahiin halaa barbachiisaa dha: walgahiin senaa maxanttuummaa kesan dhagyuu yookaan diduu murtii murteesuuf itigafatamuumaakan kan godhameef biroon hojjatootaa maxanttuummaa dha.
Ofpratii deemmuu kesan duraa misensaa waldaa gargaarsaa ta’uu yookaan hiriyootaa kesan wajjiin walgahii qopha’uu bayee barbaachisaa dha. Walgahii halaa gariitiin sababnii godhamuf murtiin isaa halaa adeemsaa isaatiin wan ta’eef isinif maxanttuummaa kenuuf hojettoonii Ofpra aman siisuu qabdanii.
Halaa balinan argachuuf hojjattoonii gafii wa’ee senaa kesan isin gafatanii garuu yoo gafii isin hin gafane ofii kesaniin godanttuummaaf dirqisisuuf wan ibsuu kanan gadii illalaa.
Paspoortii yookaan odeefannoo enyumaa dhiyesuu yoo hin dandesan lammuumaa kesan akka mirkana’uuf wa’ee biyyaa kesan ibsaa baliinaan kennuu barbachiisaa dha.
Gara biyyaa kesan yoo debiitan wan sodatan ibsuu qabdanii. Iniins biyya gadhistanii yoo turtanii dha. Halumaa kanaan hojattoonii biroon walgahii dhumaraa gaffii banaa ta’ee nii gafatanii ininis wan ibsitanif wan ida’aatan yoo jiiraatee akka ibsitan jechuu dhani. Ta’uus ta’uu battuus wan ida’atan yoo jiratee.
Mariin biroo opfpa tii (halaa harwaa piin konfaransii teelee dha) adeemsiifama namootaa marii irraa argaman :
hojatootaa maxaanttuummaa ofiisii. Sennaan maxanttuummaa kesan midha wal-qunamtii irraa too hundefamee nama salaa kesan walfakattuu akka isiiniif ramadamuu gafachuu nii dandesan
yoo gafatan abukatoon kesan yookaan waldan isiin gargaaruu mariif akka tajaba hirmachuu nii dandanii. Yeroo amaantanaa isiin wajjiin demuuf waldan hayamaa argatee Ardhis, Anafé, Cimade, Forum réfugiés, Coordination lesbienne en France, CQFD Fierté lesbienne, Ordre de Malte kan jedhamuu dha.
Wakiillii walda isiin wajjiin dhufuu marii duraa guyyaa 7 duraa (adeemsaa arriitii guyyaa 4 duraa) Ofpraf beeksiisuu qaba.
Adeemsii mariin yoomuu adeemsiifamuu gagesiittuun wan ilaalee mariin hogaa dhumuu beeksisuu nii danda’a. Iyannoon adeemsaa sennaa kesan rakkoo adeemsaa maarii rakkoo walgaluu, rakkoo afaan hiksisuu hojjatoonii ofiisii wan hin ibsiinee yoo jiiratee kan kan fakatuu dha.
iyannoon warqaa ofpra irraa tajajiilaa afaan hikkaa kennuu hiksiisaa. Afaan hadha kesan hasawuun hiksiisaa gafachuu wayaa iniiniissenaa kesan akka qaceelootii ibsuufii. Namnii tajajiilaa hikaa kan isiniif kennu bilisanii.
Senaan kesan wa’ee rakkoo salaa yoo ta’ee nama salaa waliin isiin fakatuu akka isiniif ramadanmuu gaffachuu wayyaa dha.
miseensii mattii kesan: miseensii mattii kesan garuu wan hin jiiraanee malee marii kanaa adeemsisuuf Ofpran yoo barbaachiisaa jedhee yadee marii biraaf yamuu nii danda’a.
Beeksisaa : hangaa danda’amee mariin nii waraabamaa. Yoo hin tanees isiiniif himamaa. Warabii isaa gafachu nii dandesanii marii jiijiiruuf kalee guubaaee tiinbareefamee ofiisiin murtii isaa hogaa isiniif ergaa.
3. Qorannoo fi murtii Ofpra dhan godhamuu.
Ofpran murtii guyyaa murta’ee jii’aa 6 tiibeeksisuu qaba. Ta’uus yeroo kanaa olii fudhuu nii danda’a. Garuu yoo adeemsii ariittii ta’ee guyyaa 15 guyyaa murta’ee ta’aa Hojatoonii ofiisiin senaa kesanakkataa qabatamaa biyyaa kesan wajjiin ta’uu isaa nii mirkaneesaa. Sanan boda senaa kesan qoratee waligaltee Jenevaa keyataa 1 fii 2 mirgaa maxanttuummaa qabuu kesan (kardii waggaa 10 kan kenamuu) yookaa Cesedan keyataa 712-1 dhan yeroof mirgaa maxanttuummaa qabuu kesan (kardii waggaa 4f kan kenamuu) nii murta’aa.
Debiin ofpra yoo didaa ta’ee sababaa ibsuu qabaa. Xalyaan murtii beeksisttuu balinaan ibsamaa.
Murtiin ofiisiin recommandé avec accusé de réception bifaa jedhamuutiin isiiniif ergaa.
Debiin didaa yoo isiiniif kenamee guyyaa xalyaan isiiniif gahee jalqabee gaffii oliiyannoo (fiche n°5) dhiyeesuuf guyyaa murta’ee jii’aa tokkoo niiqabdanii. Idoo poostaa yoo jiijiirtan daftanii beeksiisuu qabdan knn jedhamuu kanaafii.
Dernier ajout : vendredi 29 mars 2019, 15:50
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5423